Nzira shanu dzekusimbisa Maitiro pasina Kukanganisa Kugadzira | Martech Zone
Chipiri, February 11, 2020 Muvhuro, Kukadzi 10, 2020 Heidi Melin
Vatengesi uye vagadziri vanogona kuwana zvishoma skittish kana kutaura kwemaitiro kukwira. Izvi hazvifaniri kutishamisa. Mushure mezvose, isu tinovashandira ivo kugona kwavo kwekutanga, kufungidzira, uye kunyangwe zvisingaenderane. Tinoda kuti vafunge vakasununguka, vatibvise panzira yakarohwa, uye vagadzire mhando yechiratidzo inomira musika wakazara vanhu.
Hatigone kutendeuka totarisira kuti zvisikwa zvedu zvinyatso rongedzwa, vateveri vemitemo vanoteedzera vasingakwanise kumirira kuti vaongorore nuances yeanoshanda mafashama.
Asi kunyangwe vakasununguka-vakasununguka pakati pedu vanofanirwa kubvuma kuti kana maitiro asina kusimba kana kushayikwa, mhirizhonga inotonga, uye izvo hazvina kunaka mukugadzira kuburitsa.
Munyika mune avhareji zivo mushandi anoshandisa 57% yenguva yavo on zvese asi iro basa ravakatorerwa kuita, kuisa mhando chaiyo yechimiro munzvimbo yakakosha kupfuura nakare kose. Ndiyo chete nzira yekuchengetedza pandemonium parutivi uye kugonesa munhu wese kuti aite basa rake rakanakisa.
Hedzino shanu nzira dzekusimbisa maitiro kuitira kuti uwane nguva yekupa mubayiro, basa rekugadzira rinoenderana nezvinangwa zvakakosha zvebhizinesi.
1. Nyara Nezvazvo
Ndiri fan hombe yaKelsey Brogan's "sneaky process" nzira. Sa director wemubatanidzwa wechirongwa manejimendi pa T-Mobile, Kelsey anoda kuratidza kuvanhu kuti mafirifomu akarongeka haafanire kunge ari kutyisidzira.
Vanhu vazhinji havadi izwi rekuti 'maitiro' - kana pfungwa - nekuti vanofunga rakanyanya kuomarara. Izvo hazvisi zvekugadzira inoganhurira miganhu yekuchengeta vanhu mumigwagwa yavo. Zviri zvekuziva kuti zvinhu zviripi, zvinhu zvinofanirwa kunge zviri, pazvinokwana. Izvo ndezvekuisa pakati pevose zvinyorwa uye nekuzviisa kune imwe nzvimbo iyo munhu wese anokwanisa kuwana.
Kelsey Brogan, Director weAkabatanidzwa Chirongwa Management paT-Mobile
Asi haavimbe nemasimba ake ekunyengetedza kana kushandira kumusoro-pasi mvumo yekukwikwidza zvikwata. Pane kudaro, iye anobatsira rimwe timu kushandura panguva, uyezve anotendera iwo mabhenefiti akajeka enzira dzakasimba kuzvitaurira vega. Kana zvikwata zviri padyo zvangoona musiyano webhizimusi manejimendi manejimendi manejimendi, ivo vanokurumidza kutanga kushevedzera kuve chikamu chavo ivo. Maitiro aKelsey humbowo hwekuti kana shanduko ikachengetedzwa zvinobudirira, inowedzera uye inowedzera muviri.
2. Isa Matemplate kune Anodzokororwa Basa
Mhando dzekugadzira dzinowanzo sada kudzokorora, basa risingafungi kupfuura rakawanda. Vaisunungure kubva mukunetseka nekushandisa matemplate kwese kwazvinoita zvine musoro. Shandisa zvebhizimusi manejimendi manejimendi manejimendi kuvandudza akazara emazita emhando dzakasiyana dzeprojekti, otomatiki kugovera mabasa emabasa, uye kunyangwe fungidziro yenguva uye maawa akarongwa kune rimwe nerimwe basa. Izvi zvinonyanya kuita kuti zvese zvinorwadza maitiro zvinhu zvisaonekwe kune zvako zvisikwa.
Vatengesi vanogona kungopinda mukati uye nekukurumidza vaone basa ravakapihwa ivo pachavo. Uye mamaneja ekugadzira anogona kushandisa akavakirwa-mukati zviwanikwa zvekuronga maturusi ekuteedzera kuwanikwa kweumwe neumwe, pane kuita kuita fungidziro dzakadzidziswa kana kutumira akawanda emaimeri kuti uone kuti ndiani ane nguva yeiko.
3. Taura Wakaonekana Nezvinonamira
Chinhu chakareruka sekugadzirisa maprotocol ako ekudyira, ayo anomisikidza danho rezvimwe chirongwa, anogona kuita musiyano mukuru pane yako yekugadzira nzira. Tanga nekuona kuti chikumbiro chega chega chebasa chinotumirwa nenzira imwechete- uye kwete neemail, tsamba inonamira, kana meseji pakarepo. Iwe unogona kuseta fomu reGoogle iro rinozvizadza repakati pepadheseti kana, kunyangwe zvirinani, tora mukana wekushanda-kukumbira mashandiro mune yako bhizinesi manejimendi manejimendi manejimendi.
4. Tora Marwadzo Kunze Kwekupupurira
Dai iwe waizonhonga chidimbu chimwe chete chegadziriro yekusimbisa kusimbisa uye kugadzirisa, proofing ndiyo inonyanya kukunda mwoyo nepfungwa dzechikwata chako chekugadzira. Nedhijitari yekuratidzira tekinoroji, iwe unogona kubvisa unwieldy email macheni, inopokana mhinduro, uye vhezheni yekuvhiringidzika. Vakagadziri uye mamaneja emigwagwa vanogona kuona zviri nyore kuti ndiani apindura uye ndiani asina, achideredza zvakanyanya kudiwa kwekudzingirira pasi vane chekuita kana kukumbira mhinduro.
Nezve mabhonasi mapoinzi, wedzera dhijitari asset manejimendi (DAM) kune yako suite yezvishandiso. Vese vashambadzi vanozofarira kuve nekukasira kuwana mavhezheni echangoburwa ezvemidziyo yakatenderwa, ayo avanogona kudzikamisa nekuburitsa kunze mumafomati avanoda, pasina kupfuura nemugadziri wemifananidzo. Fungidzira kutaridzika kwezviso zvevagadziri vako pavanonzwa kuti havazombofaniri kutumira email munhu mutema-uye-chena jpg vhezheni yekambani logo zvakare.
5. Koka Zvinowanikwa Zvese
Chero iwe paunenge uchiita shanduko kune aripo maitiro - ungave uri kuita yakakwana dhijitari shanduko kana kuitisa yakanangwa yakatarwa yekushambadzira mafambiro- kukoka mazano kubva kune avo vanozonzwa kukanganiswa kweshanduko zvakanyanya. Ipo iwe uchizogona kunge uine system manejimendi kana weprojeki manejimendi nyanzvi inoita maoko-pane basa rekuongorora mafambisirwo ebasa, kunyora matanho, uye kuvaka matemplate, ita shuwa kuti vagadziri vanotarisirwa kutevedzera maitiro vanobatanidzwa nhanho dzese yenzira.
Ipa Maitiro Mukana
Iwe wakanzwa chirevo chekare kuti dhizaini yakanaka inofanira kunge isingaonekwe. Maitiro ebasa anofanira kushanda nenzira imwecheteyo. Kana vachinge vachishanda nemazvo, haufanire kuvaona. Havafanirwe kunzwa kuvhiringidza kana kuvhiringidza kana kunetesa. Ivo vanofanirwa chinyararire, zvisingaonekwe kutsigira iro basa rinofanirwa kuitwa.
Uye chinhu chinonakidza chinoitika kana mhando dzekugadzira dzichiwana mashandiro ebasa nenzira iyi - kuramba kwavo kutaura nezvechimiro uye kuyerera kwebasa zvese asi zvinonyangarika. Ivo vanokasira kuona kuti zvakanaka-zvakagadzirwa zvemadhijitari maitiro anoita zvinopfuura kuvasunungura kubva kubasa rakabatikana uye nekudzokorora mabasa. Ivo zvakare vanovapa simba rekuendesa rakakwira mhando basa nekukurumidza uye zvinoteedzana, kutora nguva yekugadzira uye hunyanzvi, uye kushandisa yakawanda yezuva rega rega vachiita basa ravakatorerwa kuti vaite.
Tags: maitiro ekugadziradhamudhizaini kubatanadhizaini matemplatedigital proofingkelsey brogansticky notest-Mobile
Heidi ndiye Chief Marketing Officer we Kubasa. Heidi mukuru-simba, mhedzisiro-yakatarisana nemusoro mukuru mutungamiri uye chipangamazano ane makore anopfuura makumi maviri ezviitiko mukuvandudza nekushandisa nzira dzekuenda-kumusika uye kushambadzira dzinotungamira kukura.